Kedu otu esi ahọta usoro isi ọnyịnye kwesịrị ekwesị maka igwe ntinye ego SMT dị elu?
Mgbe ụlọ ọrụ na-ahọrọ igwe ntinye igwe dị elu, ihe atọ dị mkpa bụ nhazi dị elu, ọsọ ọsọ ọsọ ọsọ ọsọ, na nkwụsi ike dị elu iji hụ na ị na-etinye ọsọ ọsọ ọsọ mgbe ị na-ezute nkenke ntinye micro chip. Iji mezuo mmetụta achọrọ, ntinye kwesịrị ekwesị ...
Ihe mmetụta dị na igwe ntinye SMT dị ezigbo mkpa, o nwere ụdị ụfọdụ
Igwe ntinye ego dị ka robot na-akpaghị aka. Omume ya na-ebufe omume ya niile ma werezie isi ụbụrụ na-ekpe ikpe ma na-arụ ọrụ. Colọ ọrụ Topco ga-eso gị kee na igwe ntinye ego nwere ụdị ihe mmetụta ụfọdụ. 1. Pressure mmetụta The ọnyịnye igwe, gụnyere v ...
SMT mmepụta akara ngwá usoro iwebata
Establishmenttọ ntọala nke SMT na-emepụta usoro bụ ọrụ nhazi. Ihe ịga nke ọma nke nguzobe nke smt mmepụta akara na-emetụta ọrụ nkịtị nke usoro mmepụta SMT, ma ọ nwere ike nweta nsonaazụ a tụrụ anya, yana ma ọ nwere ike weghachite itinye ego na ngwa ngwa ...
Kedu ihe m kwesịrị ị paya ntị tupu m jiri igwe ntinye
Ọtụtụ oge, maka mma nke iji ngwa eletriki, anyị anaghị eso ntuziaka. Nke a ga - eme na ngwa eletrik emebi emebi, ma belata ndụ ya. Nke a bụkwa ikpe mgbe anyị na-eji igwe ntinye. Anyị kwesịrị ịgbaso ntuziaka Achọrọ inf ...
Usoro mmepụta SMT
1. ihuenyo ebi akwụkwọ: ọrụ ya bụ solder tapawa ma ọ bụ smudge nrapado ka PCB solder na mpe mpe akwa iji kwadebe maka ịgbado ọkụ nke mmiri. Ngwa akụrụngwa ejiri igwe silk na - ebi akwụkwọ (igwe eji arụ ọrụ ntanetị), nke dị na ntanetị nke usoro mmepụta SMT. 2. gluu na-ekesa: ọ na-atanye gluu iji t ...
GUS - nyocha na mmepe nke igwe nkpuchi
Masks, dị ka "ọkọlọtọ" na ihe eji eme ihe maka igbochi na ịchịkwa ọrịa, na-adị ụkọ ma chọọ ụwa niile, ọbụlagodi na mpaghara ụfọdụ. N'ime "oria agha a", anyị nwere ike ịkwụsị ọrịa ahụ n'oge gara aga, chekwaa ndụ na mbụ wee gafere ihe isi ike earlie ...
N'ime afọ 5G, a ga-enwe nnukwu mgbanwe n'ọhịa ndị a
site ha na 20-11-01
E jiri ya tụnyere teknụzụ nkwukọrịta ọdịnala, 5G nwere arụmọrụ siri ike karị, ọtụtụ ihe nkiri na usoro ọmụmụ ọhụrụ, nke nwere ike izute ngwa ngwa nke ụlọ ọrụ na-ahụ maka ngwa ọdịnala maka netwọdụ ikuku na mgbanwe nke imepụta ọgụgụ isi, na ịchụpụ ihe ọmụma ...
site ha na 20-10-02
1. otu akụkụ nzukọ: Na-abata nnyocha => silk-ihuenyo solder tapawa (ntụpọ patch nrapado) => patch => ihicha (gwọọ) => reflow ịgbado ọkụ => ihicha => nnyocha => mmezi 2. Double-kwadoro nzukọ: A : nnyocha na-abata => PCB n'akụkụ A silk ihuenyo soldering mado (s ...